Kwadwom 3 AKCB - Lamentations 3 NIV
1Mene ɔbarima a mahu amane
wɔ nʼabufuw abaa ano.
2Wapam me afi ne ho ama manantew
sum mu na ɛnyɛ hann mu;
3Ampa ara wama nsa so atia me
mpɛn bebree, da mu nyinaa.
4Wama me were ne me nam anyin
Na wabubu me nnompe.
5Waka me ahyɛ mu, na watua me ano
ɔde nweenwen ne ahokyere atwa me ho ahyia.
6Wama matena sum mu
sɛ wɔn a wɔawuwu dedaw no.
7Wato ɔfasu atwa me ho ahyia enti mintumi nguan;
wagu me nkɔnsɔnkɔnsɔn ama matɔ beraw.
8Mpo sɛ mefrɛ anaasɛ mebɔ mpae srɛ mmoa a
osiw me mpaebɔ ano.
9Ɔde abotan asiw me kwan;
wama mʼakwan ayɛ kɔntɔnkye.
10Te sɛ sisi a ɔda hɔ retwɛn,
te sɛ gyata a watɛw,
11ɔtwee me fii ɔkwan no mu bebaree me
na ogyaw me a minni mmoa biara.
12Okuntun ne ta mu
na ɔde ne bɛmma kyerɛɛ me so.
13Ɔde bɛmma a efi ne kotoku mu
hwirew me koma mu.
14Meyɛɛ akyiwade maa me nkurɔfo nyinaa;
wɔto akutia nnwom
de di me ho fɛw da mu nyinaa.
15Ɔde nhaban nweenwen ahyɛ me ma.
Wama me bɔnwoma anom.
16Ɔde mmosea abubu me se;
na watiatia me so wɔ mfutuma mu.
17Wɔama asomdwoe abɔ me;
na me werɛ afi yiyedi.
18Enti mise, “Mʼanuonyam asa,
nea mede mʼani too so Awurade mu no nyinaa.”
19Mekae mʼamanehunu wɔ mʼakyinkyinakyinkyin mu,
nweenwen ne bɔnwoma mu.
na me kra abotow wɔ me mu.
21Nanso midwen eyi ho;
saa nti mewɔ anidaso.
22Awurade dɔ kɛse nti yɛnsɛee ɛ.
Nʼayamhyehye nni huammɔ.
23Ɛyɛ foforo anɔpa biara;
wo nokwaredi yɛ kɛse.
24Meka kyerɛ me ho se,
“Awurade yɛ me kyɛfa, enti mɛtwɛn no.”
25Awurade ye ma wɔn a wɔn anidaso wɔ ne mu,
onipa a ɔhwehwɛ no no;
26Eye sɛ wɔyɛ komm
de twɛn Awurade nkwagye.
27Eye ma ɔbarima sɛ ɔsoa konnua no
wɔ ne mmerantebere mu.
28Ma ɔntena ase komm,
efisɛ Awurade de ato ne so.
29Ma ɔmfa nʼanim nsie wɔ mfutuma mu,
ebia anidaso wɔ hɔ.
30Ma ɔmfa nʼafono mma nea ɔpɛɛ sɛ ɔbɔ no no
na ɔnhyɛ no aniwu.
31Na Awurade ntow onipa biara nkyene koraa.
32Ɛwɔ mu, ɔde awerɛhow ba de, nanso obenya ayamhyehye.
Ne dɔ kɛse no to rentwa da.
33Ofi amemenemfe mu de amanehunu
anaa awerɛhow brɛ nnipa mma.
34Sɛ wɔde wɔn nan dwerɛw
nneduafo a wɔwɔ asase no so a,
35sɛ wotiatia obi ahofadi so
wɔ Ɔsorosoroni no anim a,
36anaa sɛ wobu obi ntɛnkyew a,
Awurade renhu saa nneɛma yi ana?
37Hena na obetumi aka na wama aba mu
wɔ bere a ɛnyɛ Awurade na ɔhyɛe?
38Ɛnyɛ Ɔsorosoroni no anom
na mmusu ne nnepa fi ana?
39Adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɔteasefo nwiinwii
bere a wɔatwe nʼaso wɔ ne bɔne ho?
40Momma yɛnhwehwɛ yɛn akwan mu na yɛnsɔ nhwɛ,
na yɛnsan nkɔ Awurade nkyɛn.
41Momma yɛmma yɛn koma ne yɛn nsa so,
nkyerɛ Onyankopɔn wɔ ɔsoro, na yɛnka se:
42“Yɛayɛ bɔne, na yɛatew atua
na wamfa ankyɛ.
43“Wode abufuw akata wo ho ataa yɛn;
na woakunkum a woannya ahummɔbɔ.
44Wode wo ho asie omununkum mu
nti mpaebɔ biara nnu wo nkyɛn.
45Woayɛ yɛn atantanne ne nwura
wɔ amanaman no mu.
46“Yɛn atamfo nyinaa abaa wɔn anom tɛtrɛɛ
de tia yɛn.
47Yɛabrɛ ne ahunahuna ne akukuruhwease,
mmubui ne ɔsɛe.”
48Me nusu sen sɛ asuten
efisɛ wɔasɛe me nkurɔfo.
49Me nusu bɛsen ara,
50kosi sɛ Awurade bɛhwɛ
afi ɔsoro, na wahu.
51Nea mihu no ma me kra werɛ how,
me kuropɔn no mu mmea nyinaa nti.
52Mʼatamfo a menyɛɛ wɔn hwee
pampam me sɛ anomaa.
53Wɔpɛɛ sɛ wotwa me nkwa so
na wosiw me abo wɔ amoa mu;
54nsu bu faa me ti so,
na ɛyɛɛ me sɛnea wɔrewie me.
55Mebɔɔ wo din, Awurade
fii amoa no ase tɔnn.
56Wotee me sufrɛ: “Nsiw wʼaso
wɔ me gye sufrɛ ho.”
57Wutwiw bɛn me bere a mefrɛɛ wo no,
na wokae se, “Nsuro.”
58Wo Awurade, wudii mʼasɛm maa me;
na wugyee me nkwa.
59Woahu bɔne a wɔayɛ me, Awurade.
Di mʼasɛm ma me!
60Woahu wɔn aweretɔ no mu den,
wɔn pɔw a wɔbɔ tia me no nyinaa.
61Awurade, woate wɔn ntwirii,
wɔn pɔw a wɔbɔ tia me no nyinaa,
62nea mʼatamfo ka no asomsɛm na wɔka no brɛoo
de tia me da mu nyinaa.
63Hwɛ wɔn! Sɛ wogyinagyina hɔ anaasɛ wɔtete hɔ,
wɔto akutia nnwom de di me ho fɛw.
64Fa nea ɛfata tua wɔn so ka, Awurade,
nea wɔn nsa ayɛ nti.
65Pirim wɔn koma,
na ma wo nnome mmra wɔn so.
66Fa abufuw taa wɔn, na sɛe wɔn
fi Awurade ɔsorosoro ase.
AKCB : Kwadwom 3